Atụmatụ 7 iji nwekwuo njikọ aka na Instagram | Martech Zone
Maka ndị ahịa na-achọ ịbawanye mmata ma bulie obodo nke ndị na-eso ụzọ, ahịa anya dika Instagram emeela mkpọ na njikọ aka. N'ezie, 70% nke ndị ọrụ #Instagram elelela akara n'elu ikpo okwu, yana 62% nke ndị ọrụ na-agbaso akara
Ihe omuma a site na M2 Na-ejide na-enye ụfọdụ eziokwu, ohere, ụfọdụ ntọala ntọala na usoro aghụghọ 7 ga - enyere gị aka iru ebumnuche azụmaahịa gị na Instagram:
Gosiputa ngwa ahia ma obu oru gi - Emechara m ọrụ ngo ijikọ ọtụtụ ebe na Google Maps, veranda, na atụmatụ ndị ọzọ na saịtị. M na-akọrọ a nseta ihuenyo na Instagram. Ọ bụghị na m na-atụ anya ka ekwentị fụọ, mana anyị chọrọ ndị na-eso anyị iji hụ ike anyị.
Wulite obodo gi - Instagram na-enye ụfọdụ ezigbo ngwaọrụ ndị ị kwesịrị iji mee ihe. A mara ọkwa njikọ Facebook yana ndị na-eso gị na Instagram. Buru n'uche na Instagram nwere oke mmadụ ole ị nwere ike iso, yabụ ozugbo ị ruru ebe ahụ - ị ga-amalite mmalite akaụntụ ndị ị na-anaghị eso.
Mee ka ị mara akara gị - Eeh, aga m emeghari ntakịrị n’aka ekpe ma ọ bụ aka nri ka m nweta akara ngosi m n’agha a gbara. Ọfọn, ọ bụrụ na ị ga-ese ezigbo foto, gịnị kpatara ya? Nlebara anya nke ihe omuma na enyere aka ahia gi aka. N'ezie, ị nwere ike ịgafe ntakịrị - mana nhọrọ pere mpe nke foto akara dị mma na Instagram.
Ngosipụta ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ - Anyị na-akwado ọtụtụ ihe omume, ebe obibi, abaghị uru, na mmalite na obodo anyị, yabụ anyị nwere mmasị igosi ha na akaụntụ Instagram anyị. Anyị hụkwara nkịta na bourbon n'anya… ị ga-ahụ ndị ahụ na Instagram m.
Kpọsaanụ ndị ahịa - Anyị ejirila obi anyị niile hụ ọtụtụ ọrụ ntụgharị site na mgbasa ozi ọhụụ, mana anyị hụrụ n'anya ịkekọrịta ọdịnaya dị elu site na ọwa ahụ. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ nwere ike ghara ịtọ anyị nzukọ nzuko, ha ga-ebudata ihe nnabata n'aka anyị.
Melite ika iguzosi ike n'ihe - Ekwenyeghi m na udiri ahia anyi buru ibu iguzosi ike n'ihe bụ okwu, mana anyị na-enwe ekele maka ya mgbe ndị mmadụ dịka ngwaahịa, ọrụ anyị, ndị mmekọ, ndị ahịa, ihe omume, na azụmaahịa ndị ọzọ anyị na-eme. Amaghị m otú ọ ga-esi merụọ anyị ahụ!
Melite Instagram na akụkọ ụlọ ọrụ - Enwere aha na akụkọ? Were nnukwu nseta ihuenyo ma soro ndị obodo gị kerịta ya. Nkwupụta sitere na ndị ọzọ bụ nkwado nke ikike gị n'ịntanetị.
Enwere m ike imebi iwu (dika m na-eme), mana enwere m otu Akaụntụ Instagram nke jikọtara ma onwe m na ndụ azụmaahịa m. M hụrụ n'anya ịbụ uzo na-ekere òkè ndụ m na Instagram, na ọ na-aga n'ihu na-a oké mmeghachi omume. Ga-ahụ ịhụnanya m maka ezinụlọ m, nkịta m Gambino, azụmahịa m, ihe omume m na-aga, yana - n'ezie - ị ga-ahụ ifesa nke nnukwu bourbon jikọtara ọnụ.
Tags: instagramntinye aka na instagramihe ngosi instagramahịa nke instagramNdụmọdụ azụmaahịa instagramm2 na ejidere